Madaxweyne Roberta Mogaabe oo ka soo horjeestay baaqa iscasilaadda | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Roberta Mogaabe oo ka soo horjeestay baaqa iscasilaadda
Madaxweyne Roberta Mogaabe oo ka soo horjeestay baaqa iscasilaadda
Zimbabwe(SONNA) Waxaa sii kordhaya jahwareerka siyaasadeed ee kataagan dalka Zimbabwe,iyadoo Madaxwayne Robert Mugabe uu wacad ku maray in uu awoodda sii hayn doono dhowr todobaad ,iyada oo uu sii kordhayo cadaadiska lagu hayo ee ku aadan in xilka uu ka dago.
Madaxweynaha wadanka Zimbabawe Mr Mogabe ayaa Khudbad uu si toos ah uga jeediyay TV-ga qaranka waxaa uu ku sheegay in uu shir guddoomin doono kulanka golaha xisbiga ay yeelanayaan bisha December ee soo socota.
Waxaa xiligaasi hareer fadhiyay Robert Mugabe markii uu khudbadda jeedinayay saraakiisha sarsare ee militariga dalkaasi iyo madax kale.
Shacabka reer Zimbabawe ayaa siweyn u sugayay in Khudbadda madaxwayne Mugabe ay noqoto mid uu kaga dhawaaqo iscasilaadiisa,balse uu madaxweyne Mogaabe ayaa ku adkaysatay in uusan marna xilka ka degi doonain.
Hadalka Madaxweyne Mogaabe ayaa ku soo beegmaya xili Xubnaha xisbiga Zanu-PF ay ka cayriyeen Mugabe xilka hoggaamiyaha xisbigaasi oo Madaxwayne Mugabe u qabteen in muddo 24 saac gudahood ah uu isku casilo haddii kale ay xil ka qaadis ku samayn doonaan.
Waxaa la sugayaa go’aanka uu qaadan doono baarlamaanka Dalka ZImbabawe kuwaasi oo ku hanjabay in hadii Mr Mogaabe uu xilka wareejin waayo ay xilka ka xayuubin doonaan.
Previous articleOdayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay Dib-U-Eegista Dastuurka
Next articleWaxqabadka Dawladda ee usbuucii la soo dhaafay+Sawiro